I-COPD vs asthma: Yeyiphi eyona imbi ngakumbi? | Ukhathalelo - Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Imfundo Yezempilo, Iindaba Iindaba, Impilo Inkampani, Ukuphuma Iindaba Ekuhlaleni Inkampani, Imfundo Yezempilo Impilo-Ntle Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Ukuzonwabisa Inkampani Cinezela Inkampani, Iindaba Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Ulwazi Lweziyobisi
Eyona >> Imfundo Yezempilo >> I-COPD vs asthma: Yeyiphi eyona imbi ngakumbi?
I-COPD vs asthma: Yeyiphi eyona imbi ngakumbi?
I-COPD vs Isifo se-asthma | Ubuninzi | Iimpawu | Uxilongo | Unyango | Imiba yomngcipheko | Uthintelo | Nini ukubona ugqirha | Ii-FAQ | Izixhobo
Isifo sombefu kunye nesifo esinganyangekiyo semiphunga (COPD) zizifo zemiphunga ezinokufana kakhulu, kodwa zinokwahluka okuphambili. Zombini iimeko zineempawu ezifanayo ezibangelwa kukudumba komoya okanye ukuphazamiseka komoya. Ukuthintelwa kokuhamba komoya kuhlala kukhokelela kubunzima bokuphefumla, ukukhohlela, ukuvutha, ukuqina kwesifuba kunye nokuphefumla okufutshane.
Iimpawu ezivela kwi-asthma, ezibangelwa yi-allergen okanye ukuzivocavoca, ziza kwaye zihambe. Iimpawu zeCOPD ezinokubangelwa kukutshaya ixesha elide okanye ukubonakaliswa ixesha elide kwizicaphukisi zemichiza kuyaqhubeka. Nge-COPD, ukudumba okungapheliyo kukhokelela kumonakalo ongenakuguqulwa kwizicubu ezijikeleze umoya kunye notshintsho lwezifo kwimiphunga.
Nangona zombini izifo zingapheliyo, i-COPD yimeko eqhubekayo, intsingiselo yeempawu zihlala zihlala zikhona kwaye imeko iba mandundu ngokuhamba kwexesha. Nge-asthma, amanyathelo angathathwa ukulawula ukuphazamiseka kwaye xa ulawulwa ngokufanelekileyo, kunokwenzeka ukuba ungafumani naziphi na iimpawu ixesha elide. Kubalulekile ukwahlula i-COPD kwi-asthma ukumisela elona khondo lilungileyo lonyango. Makhe siphande ngokufana nokwahluka phakathi kwesifuba kunye neCOPD.
Ngokwe- Umbutho waseMelika wemiphunga , Iipesenti ezingama-85 ukuya kuma-90% zeCOPD zibangelwa kukutshaya. Ityhefu ekwisigarethi ityhafisa amandla emiphunga okulwa usulelo, inyanzelisa iivesi zomoya, ibangele ukudumba nokudumba, kwaye itshabalalise iisakana zomoya ezincinci emiphungeni, ezibizwa ngokuba yialveoli. Ukuvezwa kokusingqongileyo kwizicaphukisi zamachiza kunye neetyhefu, kubandakanya nongcoliseko lomoya, kunokubangela iCOPD. Inani elincinci lamatyala linokubangelwa yimeko yemfuza ethintela ukuveliswa komzimba kweproteni ekhusela imiphunga yeAlpha-1. Oku kubizwa ngokuba yi-alpha-1-deficiency-related emphysema.
Zimbini iintlobo zeCOPD: i-bronchitis engapheliyo kunye ne-emphysema. Kuzo zombini iimeko, iindlela zomoya wemiphunga ziyatyeba kwaye zitshiswe, zibangele ukuba kufe izicwili. Xa oku kusenzeka, ukutshintshiselana nge-carbon dioxide kunye neoksijini ngaphakathi kwezicubu zomzimba kuyehla, kubangele ukuphefumla okufutshane kunye nezinye iingxaki. Akukho lunyango lwe-COPD, kodwa xa ibanjwe kwangoko, inokulawulwa ngendlela yonyango oluninzi. Nazi iimeko ngokweenkcukacha ezingaphezulu:
I-bronchitis engapheliyo: Ukudumba kwimimoya yomoya yemiphunga, ebizwa ngokuba yi-bronchi, kubangela ukucaphuka okukhokelela kwimveliso yokukhwehlela evelisa isikhohlela, ukuvutha, ukuphefumla kancinci, kunye nentlungu esifubeni. Ngelixa imeko inokuphucuka okanye ibe mandundu ngokuhamba kwexesha, ayisokuze ihambe kwaphela, nangona iindlela zonyango zikhona ukulawula iimpawu.
I-Emphysema: Iingxowa zomoya wemiphunga, ezibizwa ngokuba yi-alveoli, zonakaliswa ngokuthe chu ngokuhamba kwexesha. Njengokuba i-emphysema iqhubeka, i-alveoli iyaphuka, iba sisikhwama somoya esinye endaweni yezincinci ezincinci, inciphisa umphezulu wemiphunga kwaye ibambe umoya kwinyama yayo eyonakeleyo. Oku kuphazamisa ukuhamba kweoksijini egazini kwaye kwenza ukuphefumla kube nzima.
Isifo sombefu sisifo esinganyangekiyo sokudumba kwendlela yomoya ebangelwa kukungakhuseleki kwizichaso ezibangelwa zizinto ezaliwa okanye kukucaphuka okubangela ukudumba okungapheliyo. Nangona kungengabo bonke oonobangela besifo sombe abaziwa, kunokubakho into yemfuza — ithande ukuba lilifa. Ukuzivocavoca kunye ne-allergen njengothuli, isikhunta, okanye impova kunye nokuvezwa komntwana kwizinto ezifana nomsi wecuba kunokubangela uhlaselo lwesifuba. Izifo zokuphefumla kwabantwana abancinci ezibangela ukungasebenzi kakuhle kwemiphunga zinokuba negalelo kwisifo sombefu. Kubantu abadala, ukubhencwa kwimichiza kunye nokucaphukisa emsebenzini kunokuba negalelo kwisifo sombefu sabantu abadala. Iimpawu eziqhelekileyo zesifo se-asthma kubandakanya:
Izinambuzane kunye neempuku
Izinto ezikhupha imichiza
I-COPD vs Isifo se-asthma
ICOPD Isifo sombefu
Ukuvezwa kokusingqongileyo kwityhefu nakwizinto ezicaphukisayo
Ukubonakaliswa kwizinto ezichasayo zendalo
I-COPD ichaphazela uqikelelo Izigidi ezingama-30 zaseMelika kwaye ngu I-4 yesizathu esibangela ukufa eUnited States. Kwi-2018, i-2 yezigidi zabantu abadala abane-emphysema, kwaye i-9 yezigidi yayine-bronchitis engapheliyo; ngaphezulu kwe-16 yezigidi zabantu kwafunyaniswa ukuba bane-COPD, kodwa kuqikelelwa ukuba uninzi lwezigulana ezingafunyaniswanga zeCOPD zihlala nesifo.
Ngokwe- Amaziko oLawulo noThintelo lwezifo (CDC), umntu omnye kwabali-13 e-United States unesifo sombefu. Kwi-2018, ngaphantsi nje kwe-25 yezigidi zabantu baseMelika ababenesifo sesifuba- i-19 sezigidi zabantu abadala kunye nangaphezulu kwezigidi ezi-5 zabantwana. Isifo sombefu sisifo esinganyangekiyo esikhokelela kubantwana.
I-COPD vs.ukuxhaphaka kwesifuba
Kuqikelelwa ukuba izigidi ezingama-30 zaseMelika zineCOPD
I-COPD ngoyena nobangela uphambili wokufa kwabantu e-United States
Izigidi ezingama-25 zaseMelika zazinesifo sombefu ngo-2018
Isifo sombefu sisifo esinganyangekiyo esikhokelela kubantwana
Kumanqanaba okuqala, i-COPD inokubonisa njengokuphefumla kancinci. Njengokuba isifo siqhubeka, abantu banokufumana isikhohlela esinganyangekiyo (esinyusa isikhohlela / isikhohlela), ukuphefumla okungapheliyo, ukuphefumla, usulelo lokuphefumla rhoqo, ubunzima bokuphefumla nzulu, ukuqina kwesifuba kunye nentlungu, ukudinwa, kunye necyanosis ( Imilebe eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neebhedi zenzipho).
Ukuphendula komzimba okuvuvukala kwisifuba kubangela iimpembelelo ezindleleni zomoya zabantu abane-asthma. Xa bevezwa kwi-allergen kunye nezinye izinto ezibangela, abantu abane-asthma banokuhlaselwa yi-asthma ngokukhwehlela nokuvutha, ukuqina kwesifuba, ukuphefumula okufutshane, kunye nobunzima bokuphefumla. Ukuphendula ngendlela eyiyo yomoya, uphawu lwe-asthma, kubandakanya ukwanda kobuntununtunu kwiindlela zomoya emva kokuvezwa kukucaphuka.
I-COPD vs. iimpawu zesifuba
Kunzima ukuphefumla nzulu
Imveliso yencindi egqithisileyo
Izifo ezenzeka rhoqo ekuphefumlweni
Ukuphendula ngendlela yomoya
Ukufumanisa i-COPD, uvavanyo lomzimba kunye novavanyo olulula lomsebenzi we-pulmonary spirometry zenziwa ukuvavanya indlela esebenza kakuhle ngayo imiphunga. Ngexesha lovavanyo, umntu uvuthela into yomlomo eqhotyoshelwe kwityhubhu encinci eqhagamshela kumatshini. Umatshini ulinganisa ubungakanani bomoya kunye nokukhawuleza komntu ukukhupha umoya. Ugqirha uya kuvavanya iziphumo zokufumanisa i-COPD. Kubantu abadala abaqhelekileyo, umyinge we-FEV1 / FVC (umthamo onyanzelekileyo wokuphefumla / umthamo onyanzelekileyo obalulekileyo) ngama-70-80%. Ixabiso elingaphantsi kwama-70% ngumqondiso weCOPD. Iimvavanyo ezongezelelweyo, ezifana ne-X-ray yesifuba okanye uvavanyo lwegesi yegazi yokulinganisa inqanaba leoksijini yegazi ziluncedo ekumiseni ukuba imiphunga itshintsha njani ioksijini kunye nekhabhon diokside.
Kubantu abafumana iimpawu ezifana nokuphefumla kancinci, ukukhohlela rhoqo, ukuqina kwesifuba, okanye ukuvutha, umboneleli wezempilo wenza uvavanyo olusisiseko lokufumanisa isifo se-asthma, ngokuqala ngovavanyo lwezempilo. Kuyafana nokuvavanywa kweCOPD, i-spirometry yenziwa ukuvavanya ukusebenza kwemiphunga. Igazi okanye uvavanyo lokonyuka kolusu okanye a Uvavanyo lomngeni we-methacholine inokusetyenziselwa ukumisela impendulo yomntu kwizinto ezibangela okusingqongileyo. A Akukho vavanyo amanyathelo okhupha i-nitric oxide, ukunceda oogqirha baxelele ukuba kungakanani na ukudumba okukhoyo kunye nokuba zisebenza njani i-inhaled steroids ekunciphiseni ukudumba.
I-COPD vs. ukuxilongwa kwesifo se-asthma
Uvavanyo lwegesi yegazi
Uvavanyo lwegazi okanye lolusu
Uvavanyo lomngeni we-Methacholine
Ngenxa yokuba i-COPD iqhubeka ngokuhamba kwexesha, unyango kubandakanya ukulawula iimpawu. Akukho nye iyeza elisebenza kakuhle kuzo zonke izigulana zeCOPD, ke kubalulekile ukuba usebenze nogqirha ukuza nesicwangciso sonyango esisebenzayo. Amayeza ahlukeneyo, unyango lwemiphunga, ukuyeka ukutshaya, ukulawula indlela ophila ngayo kunye nemeko yokusingqongileyo, kunye nokuhlala usesikhathini kwizitofu zokugonya zinokusetyenziswa njengenxalenye yesicwangciso sonyango.
Amayeza e-COPD abandakanya i-bronchodilators yokuphumla kwezihlunu ezijikeleze i-airways, kwaye inokuba yeyokusebenza ngokufutshane okanye ukusebenza ixesha elide. Amayeza asebenza ngokufutshane ahlala esetyenziselwa ukonyusa kunye nokusebenza ixesha elide kusetyenziselwa ulondolozo. I-inhalled corticosteroids inciphisa ukuvuvukala kwindlela yomoya, kunye nokudityaniswa kwe-inhalers zombini kune-bronchodilator kunye ne-corticosteroid. I-bronchodilators kunye ne-corticosteroids ezi-inhaled ziyafumaneka njenge-inhalers, kodwa ezinye ziyafumaneka kwizisombululo zokusebenzisa ngomatshini we-nebulizing. I-Oral steroids, ithathwa ixesha elifutshane, ukunciphisa ukudumba kwemiphunga okubangelwa kukuphazamiseka.
Kwizifo ezosulelayo zokuphefumla ezinje nge-bronchitis okanye inyumoniya, ii-antibiotics ezinje Zithromax inokumiselwa. Amanye amayeza, anje nge-phosphodiesterase-4 inhibitors kunye ne-theophylline , phucula ukuphefumla ngokunciphisa ukudumba kunye nokuphumla kwomoya.
Iproair HFA, Proventil, Ventolin (albuterol)
I-Atrovent HFA (ipratropium)
I-bronchodilators esebenza ixesha elide:
Impendulo yeSpiriva, iSpiriva Handihaler (tiotropium)
Gweba i-Ellipta (umeclidinium)
I-Serevent Diskus (salmeterol)
I-Striverdi Respimat (i-olodaterol)
UTudorza Pressair (aclidinium)
IArcapta Neohaler (indacaterol)
Inhaled corticosteroids :
Umgangatho weHFA (fluticasone)
IPulmicort Flexhaler (budesonide)
Ubungakanani be-Ellipta (i-fluticasone furoate)
UBreo Ellipta (i-fluticasone kunye ne-vilanterol)
I-Trelegy Ellipta (i-fluticasone, i-umeclidinium kunye ne-vilanterol)
Isimboli (formoterol kunye nebudesonide)
I-Advair Diskus (i-fluticasone kunye ne-salmeterol)
Impendulo edibeneyo (ialbuterol kunye neipratropium)
I-Bevespi Aerosphere (formoterol kunye ne-glycopyrrolate)
I-Stiolto Respimat (tiotropium kunye ne-olodaterol)
Anoro Ellipta (umeclidinium kunye nevilanterol)
UDuaklir Pressair (aclidinium kunye nefomoterol)
Utibron (glycopyrrolate kunye ne-indacaterol)
I-DuoNeb (albuterol kunye ne-ipratropium)
I-Elixophylline, Theo-24 (theophylline)
Olunye unyango lweCOPD
Ukuyeka ukutshaya kubaluleke kakhulu kwizigulana zeCOPD ukuze zinqande ukutshatyalaliswa kwemiphunga kwaye zithintele iimpawu ukuba zingambi ngakumbi. Ukuyeka ukutshaya kunempembelelo enkulu kumgangatho wobomi.
Ukulawula ukubonakaliswa kwendalo iityhefu kunye nokuthintela ukwanda kweCOPD, njengokungcola komoya, umsi onetyhefu, kunye nezinye izinto ezicaphukisayo kuluncedo ekulawuleni iimpawu zeCOPD.
Utshintsho kwindlela yokuphila ngokusebenzisa iinkqubo zokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwimiphunga ezibandakanya umthambo, ukutya okunempilo, kunye nemfundo malunga neCOPD ukunceda abantu abanesifo ukulawula iimpawu zabo.
Ioksijini eyongezelelweyo Ukubonelelwa ngetanki ephathekayo okanye isixhobo esifanayo sinokufuneka ukuba amanqanaba eoksijini egazi asezantsi kakhulu. Unyango lweoksijini kuphela kwendlela engqiniweyo yokwandisa ixesha lokuphila lomntu oneCOPD.
Injongo kwi ukunyanga isifuba Kukunciphisa ubunzima kunye nokuhamba rhoqo kweempawu ngokunciphisa ukudumba. Ukukunceda ukulawula unyango, abanye ababoneleli ngezempilo banokucebisa ukuba basebenzise imitha yokuhamba okuphezulu . Esi sixhobo siphathwayo sinokusetyenziselwa ukulinganisa indlela umoya ohamba ngayo ukusuka emiphungeni. Ukongezelela, kukho amayeza e-asthma amaninzi anokulawula iimpawu zesifo se-asthma.
Amayeza esi sifo
Amayeza amaninzi asebenzayo ngokukhawuleza ayafumaneka ukwenza ukuphefumla kube lula. Benza ngokunciphisa ukudumba kunye nokudumba kwindlela yomoya. Ezi zihlala zibizwa ngokuba ngabahlanguli be-inhalers kuba basebenza ngaphakathi kwemizuzu yokubathatha. Unyango oluphambili lunokubandakanya:
I-bronchodilators emfutshane: Amayeza okunceda ngokukhawuleza, abizwa ngokuba yi-bronchodilators, asetyenziswa ekuqaleni kweempawu ngexesha lokuhlaselwa sisifo sombefu kwaye asebenze ngokukhawuleza ukuphumla iindlela zomoya kunye nokwenza ukuphefumla kube lula. Iyeza i-albuterol ihlala ibizwa ngokuba yi-inhaler yokuhlangula kwaye isebenza ngaphakathi kwemizuzu yokusebenzisa.
Impendulo yeSpiriva (tiotropium)
Amayeza olawulo lwexesha elide, athathwa yonke imihla, anokusetyenziselwa ukunqanda kunye nokunciphisa ubungqongqo bokuhlaselwa sisifuba.
Ukungenisa i-corticosteroids: Inhaled corticosteroids kuthintela ukudumba.
Iinguqu zeLeukotriene: Izilungiso zeLeukotriene zisebenza ngokuthintela i-leukotrienes, iichemical immune system ezenza ukuba iindlela zomoya zithintele ekuphenduleni izinto ezibangela ukungabikho komzimba.
Inhalers yokudibanisa: Iindibaniselwano ze-inhalers zine-corticosteroid ukunqanda ukudumba kunye ne-bronchodilator ukwenza ukuphefumla kube lula ngokuphumla kwemiphunga nokwandisa iindlela zomoya.
Advair HFA (salmeterol kunye ne-fluticasone)
Dulera (i-mometasone kunye nefomoterol)
Izisombululo ze-Nebulization: NjengeCOPD, izisombululo ze-nebulization zinokusetyenziselwa unyango lwe-asthma.
I-Oral steroids: Oku kunokumiselwa iveki enye okanye ezimbini emva kohlaselo lokugcina ukudumba.
Ukuphinda kabini (inaliti ye-dupilumab)
Olunye unyango lwe-asthma
Ukuphepha i-allergener kunye ne-irritants kwindalo esingqongileyo kunciphisa iziphumo zokuvezwa. Izitshizi zempumlo azamkelwa kunyango lwesifo sombefu; Nangona kunjalo, ziyasebenza ekunyangeni ii-aleji zonyaka ezinokubangela isifuba.
Ukuhlala usexesheni ngogonyo ikwabalulekile nasekulawuleni isifuba kuba iyanceda ukugcina amajoni omzimba omelele kwaye anciphise umngcipheko wosulelo lokuphefumla, olunokuthi lwonyuse iimpawu.
Inaliti ezingezo-steroidal ye i-anti-IgE kunye ne-anti-IL5 monoclonal antibodies inokusetyenziswa rhoqo kwiiveki ezimbini ukuya kwezisibhozo ukunciphisa ukudumba kubantu abane-asthma ebukhali, ekunzima ukuyilawula. Ezi ntsholongwane zisebenza ngokuthintela iindlela ezithile zeemolekyuli kubantu abane-asthma. Oku kubandakanya Xolair(Omalizumab) kwaye Nucala(mepolizumab) .
I-bronchial thermoplasty , inkqubo apho kusetyenziswa khona i-bronchoscope ukufaka ubushushu kwimibhobho ye-bronchial, ukunciphisa inani lezihlunu ezigudileyo, kunokusebenza kunyango lwe-asthma ebukhali.
I-COPD vs. unyango lwe-asthma
Iintsholongwane (kusulelo olubi)
Ukuhlala usexesheni ngogonyo
Ukulawula ukubonakaliswa kwezinto ezibangela okusingqongileyo
Utshintsho kwindlela yokuphila
Ukuvuselelwa kwenkqubo yemiphunga
Amachiza omzimba monoclonal
Umsi wecuba ngowona mngcipheko ubaluleke kakhulu ekuphuhliseni i-COPD, nokuba umntu uyatshaya okanye uye wachaphazeleka ekutshayeni ixesha elide. Abantu abane-asthma basemngciphekweni we-COPD, ngakumbi ukuba bayatshaya (ukutshaya okulandelayo kunokukhokelela kwi-COPD kwi-asthmatics), kunye nendawo yokusebenza apho ukuvezwa eluthulini, imichiza okanye imisi yonyusa umngcipheko. Ukusilela kwe-alpha-1 antitrypsin, ukuphazamiseka kwemfuza okukhokelela kumonakalo kwimisipha yemiphunga, kunokukhokelela nakwiCOPD.
Isifo sombefu sisifo semiphunga esihamba kwiintsapho. Ngokwe- Umbutho waseMelika wemiphunga , Umntu onomzali onesifo sombefu amathuba aphindwe kathathu kuye kathandathu okuba asikhule ngexesha lokuphila kwakhe kunaye umntu ongenayo imbali yosapho. Izifo zokuphefumla komntwana ezonakalisa imiphunga, i-allergies, ukubonwa emsebenzini kukucaphukisa, ukutshaya, kunye nongcoliseko lomoya konke kukonyusa ukungangqinelani komntu kwisifuba. Ukutyeba kakhulu kunxulunyaniswa nomngcipheko wesifuba.
I-COPD vs. umngcipheko wesifuba
Ukubonakaliswa komsi wecuba
Ukuboniswa kongcoliseko lomoya
Ukuvezwa emsebenzini, uthuli, okanye imichiza
Izifo zokuphefumla komntwana
Eyona ndlela ibalulekileyo emntwini yokuthintela i-COPD kukuphepha ukutshaya okanye ukuyeka ukuba sele betshaya. Ukuyeka yeyona ndlela ibaluleke kakhulu kwizigulana zeCOPD ukunqanda ukonakala ngakumbi kwempilo yemiphunga kunye nokwandisa ixesha lokuphila. Kwakhona kubalulekile ukuhlala kude nomsi wecuba kunye nokuphepha ukucaphukisa njengeekhemikhali, uthuli kunye nomsi. Ukuhlala usempilweni kangangoko ngokufumana ugonyo olucetyiswayo kunye nokuthintela usulelo lokuphefumla kuluncedo ekuthinteleni ukunyuka kweCOPD kubantu abanayo.
Umsi wecuba uyingozi kakhulu kwabo banesifuba, nabo kufuneka bakuphephe ukubhencwa kukutshaya. Ukuphepha ukubangela i-allergen kunye ne-chemical irritants kubalulekile kubantu abane-asthma, njengokuba uhlala uphilile kwaye ugonyelwe umkhuhlane kunye nezinye iindlela zokugonywa.
Abantu abanesicwangciso sonyango sombefu kufuneka banamathele kuyo, bathathe amayeza abo njengoko kumiselwe; i-immunotherapy, okanye i-allergy shots, inokunceda ukunciphisa umngcipheko wokuhlaselwa.
Iphulo leLizwe jikelele le-Asthma sisibonelelo esikhulu sezigulana ezinesifo sombefu, ukubonelela ngeendlela eziqinisekisiweyo zokuthintela okanye ukunciphisa ukusasazeka okanye iingxaki zesifuba.
Ungayithintela njani i-COPD vs. i-asthma
Musa ukutshaya, okanye uyeke ukutshaya
Kuphephe ukubhencwa ngumsi wecuba
Ukukhuselwa ekuchaphazelweni yimichiza, uthuli kunye nomphunga
Zama ukuhlala usempilweni kwaye usexesheni ngogonyo
Nini ukubona ugqirha kwiCOPD okanye isifuba
Xa ufumana iimpawu zokuphefumla, kubalulekile ukubonisana nomboneleli wezempilo ukufumanisa ukuba ingaba yi-COPD okanye i-asthma. Ugqirha uya kuqhuba uvavanyo olucokisekileyo ukufumanisa isifo esichanekileyo kunye nesicwangciso sonyango esenzelwe wena ukunceda ukulawula izifo zokuphefumla.
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga neCOPD kunye nesifuba
Nguwuphi umahluko phakathi kwesifuba kunye neCOPD?
Isifuba sokuphefumula sisifo sokuphefumla esichaphazela iityhubhu ze-bronchial, okanye i-airways, ezenza ukuba zithintele i-allergen okanye i-irritants, zombini ezo zinto zingabangela ukuhlaselwa yi-asthma. Ngexesha lokuhlaselwa sisifuba, kunzima ukuphefumla, kwaye ukuvutha, ukukhwehlela, kunye nokuqina kwesifuba kungenzeka. Ngelixa i-COPD nayo inokubangela ezi mpawu, kunokwenzeka ukuba ufumane ukukhohlela okungaguqukiyo nephlegm.
Ngokungafani nesifuba se-asthma, i-COPD yimeko engapheliyo ebangelwa ngumonakalo emiphungeni ngokuhamba kwexesha, ihlala ibangelwa kukutshaya, kwaye ayinakuphinda ibuye. Nge-asthma, ukuphefumla kubuyela kwinto yesiqhelo emva kohlaselo, kodwa iimpawu zeCOPD ziqhelekile. Ngokwesiqhelo, i-COPD ikhula ebantwini emva kweminyaka engama-40 kwaye iba sisifo esingapheliyo sokusebenza kwemiphunga ngelixaIsifubainokukhula kubantu phantse bayo nayiphi na iminyaka.
Yeyiphi eyona imbi ngakumbi: i-COPD okanye i-asthma?
I-COPD imbi kakhulu kune-asthma. Ngesicwangciso sonyango esenziwe kakuhle, iimpawu zesifuba zinokulawulwa ngokwaneleyo ukubuyisela ukusebenza kwemiphunga kwindawo yesiqhelo, okanye kufutshane kakhulu kwesiqhelo, ke imeko ngokubanzi ithathwa njengeya kubuyela umva. Nangona iimpawu zeCOPD zinokulawulwa kakuhle ngonyango olwahlukeneyo, isifo sokuphefumla asinakuphinda senziwe, ngenxa yoko nawuphi na umonakalo womsebenzi wemiphunga owenzekileyo awunakubuyiselwa.
Ngaba i-asthma inokujika ibe yi-COPD?
Isifo sombefu asihlali sikhokelela kwi-COPD, kodwa yinto enobungozi. Umonakalo wemiphunga obangelwa kukungalawuleki kakuhle kwesifuba somzimba kunye nokuhlala uchanabeke kwizicaphukisi ezifana nomsi wecuba okanye iikhemikhali zasemsebenzini kunye nomphunga awunakulungiseka kwaye unokwandisa umngcipheko womntu wokuba nesifo semiphunga iCOPD. Kuyenzeka ukuba ube nesifuba kunye neCOPD, imeko ebizwa ngokuba Isifo se-asthma-COPD overlap syndrome (ACOS) .
Ngaba i-asthma inhalers inceda i-COPD?
Ezinye ze-inhalers ezifanayo ezisetyenziselwa ukulawulwa kwesifo sombefu ziyasebenza kunyango lweCOPD. Iibronchodilators zisebenza ngokukhawuleza ukuphumla iindlela zomoya kunye nokwenza ukuphefumla kube lula, kwaye inhaled corticosteroids inciphisa ukudumba.
Iziseko malunga neCOPD , I-CDC
Isifo sombefu , I-CDC
Izifo ezingapheliyo zePulmonary Disease (COPD) Umbutho wemilenze yaseMelika
Funda malunga nesifuba Umbutho wemilenze yaseMelika
COPD kunye nesifuba , KwiAmerican Academy yoGqirha boSapho
Uqikelelo lweLizwe kunye neLizwe lweCOPD lokuSweleka kunye nokuSweleka- eUnited States, 2014-2015 , Isiseko seCOPD
Ubuninzi beCOPD Umbutho wemilenze yaseMelika
Iinyani zesifo sombefu , Isifuba Se-Asma Esibangelwa Kukwalana Nezinto saseMelika
Isifo sombefu esinamandla: anti-IgE okanye anti-IL-5 , Ijenali yaseYurophu yokuPhefumla
Funda ukubona iimpawu zeserotonin syndrome
I-Ozempic vs. Trulicity: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
indlela yokunceda i-hangover embi
bangaphi abantu abaxinezelekileyo emhlabeni
ngaphezulu kweyeza lomkhuhlane njenge-tamiflu
leliphi elona gazi lilungileyo lokuncipha kwi-atrial fibrillation
ndingayithatha icac claritin d kunye ne-flonase kunye
lithini inqanaba leswekile yegazi elungileyo kwi-nondiabetic
Uyintoni umahluko phakathi kwe-focal kunye ne-adderall